BURMA CANADIAN ASSOCIATION OF ONTARIO - Burma Canadian Association of Ontario
T H A N K Y O U F O R A L L Y O U R S U P P O R T T O T H E C O M M U N I T Y
အလှူငွေ မြန်မာငွေကျပ် ၁၀ သိန်း အနက်မှ BCAO ယခင်သက်တမ်းတွင် လှူဒါန်းရန်ရှိခဲ့သော ကနေဒီယန် ဒေါ်လာ ၆၀၀ နှင့်ညီမျှသော မြန်မာငွေကျပ် ၇၂၀၀၀၀ အား ထည့်ဝင်လှူဒါန်းရန် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခု BCAO အစည်းအဝေးမှ သဘောတူလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Please Download the PDF file for the application forms which have4pages.
All positions within Toronto Police Service Job Fair
မြန်မာရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးရံပုံငွေရှာ ဈေးရောင်းပွဲ၊ စနေနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်
Contact for Volunteer work
Burmese Buddhist Association of Ontario is looking for volunteers to help at Mahadhammika Temple in Toronto. Interested youths from Burmese Communities can contact to the contact persons in the following advertisement.
​ တိုရန်တိုမြို့ မဟာဓမ္မိကကျောင်း မှ လုပ်အားပေးခေါ်ယူလျှက်ရှိရာ စိတ်ဝင်စားသူ မြန်မာ အသင်းအဖွဲ့များမှ လူငယ်များ အောက်ပါကြော်ငြာတွင်ဖေါ်ပြထားသော ပုဂ္ဂိုလ် များထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Invitation to AGM and Election
မြန်မာကနေဒီယံအသင်းကြီး၏ ညီလာခံအစည်းအဝေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း။
Northwood Community Center, 15 Clubhouse Ct, Toronto ON, M3L 2K5
Canadian Multicultural Council (Asian in Ontario) Outstanding Asian Canaidian Award 2018 ချီးမြှင့်ပွဲတွင်
​မြန်မာကွန်မြူနီတီမှ ကိုမင်းသူ ဆုယူအပြီး အမှတ်တရ
မေလ၊ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၈။
​နှစ်သစ်ကူးနှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်- ၂၀၁၈ တိုရန်တိုမြို့၊ ကနေဒါ ။ မြင်ကွင်း
Invitation to New Year & Thingyan Festival, 2018
နှစ်သစ်ကူးနှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ ကြွရောက်အားပေးပါရန် ဖိတ်ကြားခြင်း။
သင်္ကြန်ပွဲတော် တိုရန်တို၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်
​​၂၀၁၈ ခုနှစ် ပထမအကြီမ် မြန်မာကနေဒီယန်ကွန်မြူနီတီ စုရုံးတွေ့ဆုံပွဲ တရပ်ကို အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များ ဖြင့်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့၊ စနေနေ့တွင် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားပါသဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။
မြန်မာ ကနေဒီယန်များ၊ ကနေဒါရောက်မြန်မာ(မိတ်သစ်၊ မိတ်ဟောင်း)များ မကြာမကြာ တွေ့ဆုံ ခြင်းဖြင့် ပိုမို ရင်းနှီးပျော်ရွှင်မှုတိုးစေရန်။
ဆောင်းရာသီ အေးစက်အုံ့ဆိုင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ရှိနေသည့်၊ လေးပင်ငြီးငွေ့စိတ်များအား မိတ်ဆွေများနှင့် ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံစားသောက်ခြင်းအားဖြင့်၊ အဆိုပါငြီးငွေ့စိတ်များ ကင်းစင်၍ စိတ်လက်ပေါ့ပါး ပျော်ရွှင် စေရန်။
လုပ်အားပေးလိုသည့် လုပ်အားရှင်များကိုစနစ်တကျ စုဆောင်းရန်။
At CMC Year End Potluck Event December 6, 2017
​Food Fair & Picnic Activity July 22, 2017
Burmese Traditional Food are Available at Food Fair. Come and enjoy it.
Akyaw Sone (အကြော်စုံ), Monhinkha, ( မုန့်ဟင်းခါး ) Rice vermicilli နန်းကြီးသုတ်၊ Athutsone (အသုတ်စုံ ), Montletsawn ( မုန့်လက်ဆောင်း ), Baryani, ( ဒံပေါက် ), Fried sorrel leave ( ချဉ်ပေါင်ကြော် ), Chicken rice (ကြက်ဆီထမင်း), Pea pyout ( ပဲပြုတ် ) Poppyseeds cake ( ဘိန်းမုန့်), and more---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရန်တိုမြို့တွင်ရန်ပုံငွေပွဲအတွက် လာရောက်သီဆိုဖျော်ဖြေသော အဆိုတော် R ဇာနီနှင့် အဆိုတော် ဆုံသင်းပါတို့ ၁၈ရက်နေ့ နေ့လည် ၃ နာရီက တိုရန်တိုမြို့ Pearson international airport မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့လေကြောင်းဖြင့်ပြန်လည်ထွက်ခွါသွားကြလေသည်။ လေဆိပ်သို့ မြန်မာ ကနေဒီယန်အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မိတ်ဆွေများကလိုက်ပါပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။ ( ၁၈-၀၇- ၂၀၁၇)
BCAO Fund Raising Musical Concert,
Celebrities Sone Thin Par and R Zani
Scholarship and Bursary Youth Pioneering in Community Award by B.C.A.O in Toronto
အထက်တန်းဆင့် မြန်မာကနေဒီယံ ကျောင်းသားလူငယ်များအား ပညာသင်ဆုနှင့် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခန်းအနားတစ်ရပ်ကို မြန်မာကနေဒီယံအသင်း( အွန်တေးရီးယိုး) မှ စနေနေ့ ( ၂၂-၀၇- ၂၀၁၇) က တိုရန်တိုမြီု့ တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပညာသင်ဆုနှင့် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခန်းအနား ကျင်းပရခြင်းမှာ ကနေဒီယံမြန်မာလူငယ်များ တုိးတက်ထူးချွန်လိုသည့် စိတ်ဓါတ်များ များပြားလာစေရန် စိတ်ဓါတ်မြှင့်တင်ပေးခြင်း သာဖြစ်ကြောင်း၊ အဏာဂတ်တွင် ကနေဒါ မြန်မာလူငယ်များ မိမိကွန်မြူနီတီအတွင်းတွင်လည်းကောင်း၊ မိမိပြည်နယ်အတွင်း၌ လည်းကောင်း၊ မိမိတိုင်းပြည်အတွင်း၌ လည်းကောင်း ဦးဆောင်မှုအခန်းတွင် တာဝန်ယူနိုင် စွမ်းရှိသော လူငယ်များ ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ အခြေခံစိတ်ဓါတ်များကို မြှင့် တင်ပေးခြင်းသာဖြစ်ေကြာင်း မြန်မာကနေဒီယန်အသင်း ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမောင်မှ အခန်းအနားအဖွင့်အမှာစကားတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုအကြီမ်သည် ငါးကြီမ်မြှောက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထူး ချွန်ဆုရကျောင်းသား ၅ ဦးရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ (၁၅ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၇)
The 5th scholarship and bursary youth pioneering in community award ceremony was hold on Saturday, July 22nd 2017 in Toronto. The ceremony has been organized by Burma Canadian Association of Ontario. This year, five recipients received the awards. The awards are given to outstanding Burmese Canadian students from different secondary schools around Ontario. According to U Win Maung, the president of B.C.A.O, the scholarship program is just to encourage the outstanding Burmese Canadian generations to raise their spirit of improvement.
(07- 15- 2017)
Scholarship and Bursary Youth Pioneering in Community Award by B.C.A.O 2017
​အဆိုတော် ဆုံသင်းပါရ် နှင့် R ဇာနည်တို့ တိုရန်တိုမြို့သို့ရောက်ရှိ
အဆိုတော် ဆုံသင်းပါရ် နှင့် R ဇာနည်တို့သည် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့ ညနေ ၈ နာရီတွင် ကနေဒါပြည်တွင်းလေယာဉ်ဖြင့် ဗန်ကူးဗား မြို့ မှ တိုရန်တိုမြို့သို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ အဆိုတော်များအား ပွဲစီစဉ်သူ တာဝန်ရှိသူ များ၊ မိတ်သင်္ဂဟများနှင့် ဆုန်သင်းပါရ်၏ ဆွေမျိုးများမှ Pearson International Airport တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပါသည်။
အဆိုတော်များသည် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့ စနေနေ့ ညနေ ၅ နာရီမှ ၁၁ နာရီအထိ၊ မြန်မာ ကနေဒီယံအသင်း အွန်တားရေးယိုး ၏ ရံပုံငွေရှာဖွေပွဲတွင် သီချင်း သီဆိုဖျော်ဖြေကြမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် British Columbia ပြည်နယ် Vancouver မြို့ နှင့် Alberta ပြည်နယ် Calgary မြို့များတွင် သီချင်းသီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။
R ဇာနည်နှင့် ဆုံသင်းပါရ် တို့အား ပွဲစီစဉ်သူ တာဝန်ရှိသူများနှင့် မိတ်ဆွေသင်္ဂဟများမှာ လေယာဉ်ကွင်းတွင် ကြိုဆိုကြရာပုံ
Picnic & Food Fair - 2017
Date: July 22nd ( Saturday ), 2017
Vanue : Area 3, Ear Bale Park( Sheppard Ave. West and Bathurst Street)
Authentic Burmese Traditional Food and Modified Food Will Be Available
Fund Raising Musical Concert to be Held
​​မြန်မာကနေဒီယံအသင်း ရံပုံငွေ သီချင်းသီဆိုဖျော်ဖြေပွဲ။
Burma Canadian association of Ontario will holdafund raising concert on July 15, 2017 at Korean Culture Center, Toronto. Two famous Burmese celebrities, R Zani and Sung Tin Par are going to perform the event. Tickets at $ 70, $ 60, $ 40 are on sale. Half of the fund will go for obtaining clean water in villages and rural areas in Burma.
For tickets, call the following Numbers:
1 647 687 1202 – Win Maung 1 647 530 5419 – May Zin Htut ( Jo Jo) 1 416 516 7383, 416 799 0021 – U Nyunt Hla 1 705 816 5877 – May Hnin Htut (Bok Bok) 1 416 272 9634 – Mar Mar Cho
မြန်မာ ကနေဒီယံအသင်းမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရံပုံငွေ ရှာဖွေပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုတော် R ဇာနည် နှင့်ဆုံသင်းပါတို့ မှ သီဆို ဖျော်ဖြေကြမည်ဖြစ်သည်။ ရံပုံငွေ၏ ထက်ဝက်ကို ပြည်တွင်း ကျေးလက်ဒေသ သောက်သုံးရေ ရရှိရေး အတွက်လှူဒါန်း မည်ဖြစ်သည်။
လက်မှတ်များကို တစ်စောင်လျှင် ဒေါ်လာ - ၇၀၊ ၆၀၊ ၄၀ အသီးသီးဖြင့် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့မှ စတင်ရောင်းချလျှက်ရှိသည်။
လက်မှတ်ဝယ်လိုလျှင် - ဦးဝင်းမောင် ( ph. 647 687 1202 )
ဒေါ်မေဇင်ထွဋ်- Jo Jo ( Ph. 647 530 5419)
ဦးညွန်လှ (Ph. 416 516 7383, 416 799 0021)
ဒေါ်မေနှင်းထွဋ်- Bok Bok (Ph. 705 816 5877)
ဒေါ်မာမာချို (416 272 9634)
​Fund Raising T-Shirt on Sale
BCAO is selling T-Shirts Sung Tin Par and R Zani photos on it. The price is CAD 20 each.
​​နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုရန်တိုမြန်မာများနှင့်တွေ့ဆုံ
​နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရန်တိုမြို့သို့ မေလ ၅ ရက်နေ့က ရောက်ရှိကာ မေလ ၉ ရက် သောကြာနေ့တွင် တိုရန်တိုမြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းများနှင့် မြို့တော်ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ဆုံပွဲသို့ မြို့တော်ဝန် John Tory လည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားဟောင်းများ ၂၀၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်လိုသူ များပြားသော်လည်း တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ထားသော ခန်းမမှာ လူဦးရေ ၂၅၀ခန့်သာဆန့်သောကြောင့် တွေ့ဆုံခွင့်မရသူ အများအပြားရှိခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မိမိတို့ပေးလိုသော သတင်းစကားကြားသိစေရန် မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် စုရုံးဆန္ဒဖေါ်ပြသူများလည်းရှိသည်။ ( မေလ၊ ၂၀၁၇) ဓါတ်ပုံ မင်းသူ+
Venerable Sayadaw Ashin U Kawwida Received Asian Heritage Award
ဆရာတော် အရှင်ဦးကောဝိဒ Asian Heritage Award ဆုရရှိ
Ashin U Kawwida from Mahadammika Myanmar Buddhist Temple, Toronto received Asian Heritage Month Award for 2017. The award is conferred to Ontario residents in Asian background and devotees for social and cultural activities by the Canadian Multicultural Council Asians in Ontario. Ashin U Kawwida has been nominated for CMC Asian Heritage Award 2017 by Burma Canadian association of Ontario. Sayadaw is one of the thirteen nominees received the year 2017 award.
တိုရန်တိုမြို့ မဟာဓမ္မိကကျောင်းတိုက်ဆရာတော် အရှင် ဦးကောဝိဒသည် Canadian Multicultural Council Asians in Ontario ( CMC) မှချီးမြှင့်သော ၂၀၁၇ ခုနှစ် Asian Heritage ဆုကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆုမှာ အွန်တေးရီးယိုး ပြည်နယ် အတွင်းနေထိုင်ပြီး လူမှုရေး လုပ်များတွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်သော အာရှနွယ်ဖွားများအား CMC မှ နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်သည့်ဆုဖြစ်သည်။ CMC ၏ အဖွဲ့ဝင်ြ ဖစ်သော မြန်မာ ကနေဒီယံ အသင်းအွန်တေးရီးယို မှ ယခုနှစ် အဆိုပါဆုအတွက် ဆရာတော် ဦးကောဝိဒအား အမည်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် အဆိုပါ ဆုရရှိသူ ၁၃ ဦးရှိသည်။ ( ၆ ရက်၊ မေလ၊ ၂၀၁၇)
BCAO Published Its 25th Anniversary Magazine 2016
2016 BCAO nominated Asian Heritage Award Winner
Mr. Mie Tha Lah
Next BCAO Meeting: Term-End Meeting